I-Howgill Barn 4- Igumbi Lomndeni e-Yorkshire Dales - I-Airbnb
I-Howgill Barn 4- Igumbi Lomndeni e-Yorkshire Dales
Skipton, England, i-United Kingdom
Ikamelo e-inqolobane ibungazwe ngu-Chloe
Isibaya samatshe sendabuko sase-Yorkshire Dales, esinamagumbi amane - amawele amabili namakamelo amathathu omndeni amakhulu anezinga le-mezzanine. Isisekelo esihle sabahambi ngezinyawo nabahamba ngamabhayisikili abafuna ukuhlola izwe likaNkulunkulu uqobo.
Indawo izuza engadini yayo, ebheke umbono omangalisayo we-Upper Wharfedale. Ekupheleni kosuku, jabulela indawo yethu yokuhlala yangaphandle futhi ufudumale umgodi womlilo njengoba uthatha ilanga elishonayo.
*sicela uqaphele, izinyathelo ezikhuphukela ezingeni le-mezzanine zingumqansa*
Igumbi 4 kwangu-4 - Leli gumbi elizimele linombhede wabantu ababili nombhede osofa ababili.
Amakamelo ethu ahlanganisa ifenisha yesimanje nezici zendabuko ukuze alenze libe yindawo ethokomele futhi exakile yokuhlala.
Ikamelo lifika nesiqandisi, i-microwave neketela kodwa alinalo ikhishi eligcwele.
Ngomfula iWharfe, iSitulo sikaSimon, iTrollers Gill kanye neBolton Abbey emnyango, izinketho zokuhamba nokugibela ezisuka esibayeni azipheli. Ikhefi ye-Brownie Barn engumakhelwane ivula izinsuku ezingu-7 ngeviki, inikezela ngama-brownies awina imiklomelo, eduze neziphuzo ezishisayo nezibandayo kanye nezinketho zokudla okumnandi. Idolobhana eliseduze lase-Appletreewick linamashibhi amabili amahle anezinye izinketho ezindaweni ezizungezile zaseDales.
Inqolobane yethu iphethwe futhi iphethwe abasebenzi baseBrownie Barn engumakhelwane, ngakho ukusekelwa kutholakala kalula uma ukudinga ngesikhathi uhlala.
Hlola ezinye izinketho ezise- Skipton namaphethelo